Akụkọ - Ihe mkpuchi ohuru di iche iche na-echebe COVID-19
Ihe mkpuchi ohuru di iche iche na-echebe megide COVID-19
Ọrịa Coronavirus 2019 (Covid-19) bụ nje virus ọhụụ achọpụtara na ọ bụ ihe kpatara nnukwu ọrịa na-efe efe nke na-agbasa ngwa ngwa, gụnyere ọrịa oyi na-egbu egbu. Ọrịa a bidoro na Wuhan, China na Jenụwarị 2020, ma toro na ọrịa na-efe efe na nsogbu ụwa niile. Edepụtara nje ahụ n'oge na-adịghị anya 2019-nCoV ma mesịa nye ya aha gọọmentị SARS-CoV-2.
SARS-CoV-2 bụ nje virus siri ike ma na-efe efe nke na-agbasa site na mmadụ gaa na mmadụ. Ọ na - agbasakwa mgbe onye bu nje ma ọ bụ zee ụkwara ụkwara, ma tụdaa ala n’elu ma ọ bụ n’ihe. Onye metụrụ n’elu elu ma metụ imi, ọnụ ma ọ bụ anya aka ya, nwere ike ibute nje ahụ.
N’agbanyeghi na nje oria adighi eto n’elu ebe anaghi ebi ndu, ihe omumu a gosiputara na coronavirus nwere ike inogide ma obu bu oria n’elu igwe, iko, osisi, akwa na plastik otutu otutu awa rue ubochi, n’agbanyeghi na elu aru di ocha ma obu di ocha. Nje virus dị mfe mbibi, na-eji disinfectants dị mfe dị ka ethanol (62-71%), hydrogen peroxide (0.5%) ma ọ bụ sodium hypochlorite (0.1%) site na imebi envelopu siri ike nke na -agba obere microbe ahụ. Agbanyeghị, ọ gaghị ekwe omume ịsachapụ anya n'oge niile, na disinfection anaghị ekwe nkwa na elu ahụ agaghị emerụ ọzọ.
Ebumnuche nyocha anyị bụ imepụta ihe mkpuchi nwere ike dị ala dị ala nke nwere ike iweghasị glycoprotein na arịlịka nke na-arị elu, yana iji kemịkal na-arụ ọrụ iji mee ka glycoprotein na viral nucleotides adịghị arụ ọrụ. Anyị mepee elu, anti-microbial (anti-viral and bactericidal) NANOVA HYGIENE + ™, nke na-ebelata ihe ize ndụ nke nje microbial fọrọ nke nta ka ọ bụrụ maka akụkụ niile, gụnyere ọla, iko, osisi, akwa na plastik site n'ụkpụrụ nke igbochi ụmụ nje, na-enye nke na-enweghị osisi na-akpata ọrịa na ịdebe onwe ya maka ụbọchị 90. Teknụzụ mepụtara dị irè ma kwado ya megide SARS-CoV-2, nje maka COVID-19.
Nkà na ụzụ anyị na-arụ ọrụ na usoro ịkpọtụrụ elu, nke pụtara na ozugbo germs ọ bụla batara na mkpuchi ahụ ọ na-amalite ịkwụsị ọrụ nje. Ejiri ya na nchikota nke ọlaọcha nanoparticles (dị ka virocidal) na ndị na-abụghị ndị na-agagharị amranium nnu disinfectant (dịka virostatic). Ndị a dị oke irè na inactivation nke nje RNA enveloped na nje DNA genome. A nwalela mkpuchi ahụ megide coronavirus mmadụ (229E) (ụdị Alpha coronavirus) na Nelson Lab, USA; bovine coronavirus (S379) (typedị Beta coronavirus 1) si Eurofin, Italy; na MS2, nje RNA, nje na-anọchi anya nje Picoma dị ka Poliovirus na mmadụ norovirus sitere na ụlọ nyocha NABL a kwadoro na India. Ngwaahịa na-egosi nrụpụta ọrụ nke> 99% ka a nwalere ha dịka ụkpụrụ ISO, JIS, EN na AATCC zuru ụwa ọnụ (Ngosipụta 1). Ọzọkwa, a nwalere ngwaahịa ahụ maka ihe ndị na-egbu egbu na-adịghị egbu egbu dị ka ọkọlọtọ zuru ụwa ọnụ nke Nontoxic Acute Dermal Skin Irritation Report (OECD 404) sitere na ụlọ ọrụ nyocha ụlọ ọrụ FDA nke APT nyocha, Pune, India, na kwa ule nyocha ụwa maka nri kọntaktị US. FDA 175.300 si CFTRI, Mysore, India. Ihe nlere ndị a gosipụtara na ngwaahịa a adịghị egbu egbu ma dịkwa mma iji ya.
Anyị etinyela akwụkwọ ikike na teknụzụ a na ngwa mba. 202021020915. Thedị ọrụ nke teknụzụ NANOVA HYGIENE + bụ ndị a:
1. Dika umu nje no na mkpuchi, ndi AgNP na egbochi ihe mmeghari nje nucleotides, ihe bu isi na ya bu oria ojoo. Ọ na - ejikọta ndị na - enye onyinye elektrọn dịka sọlfọ, ikuku oxygen na nitrogen a na - ahụkarị na enzymes n'ime microbe. Nke a na - eme ka enzymes ahụ pụta, si otú a na - ewepu ikike nke sel n’ọrụ. Microbe ahụ ga - anwụ ngwa ngwa.
2. ọlaọcha cationic (Ag +) ma ọ bụ QUAT na-arụ ọrụ iji mebie coronavirus mmadụ site na mmekọrịta ya na elu (spike) protein, S, dabere na ụgwọ ya dị ka ọ na-arụ ọrụ na nje HIV, nje ịba ọcha n'anya, wdg. (Ọgụgụ 2).
Teknụzụ ahụ nwetara ihe ịga nke ọma na nkwanye sitere n'aka ọtụtụ ndị ọkachamara na ndị sayensị. NANOVA HYGIENE + na-egosi nkwarụ zuru oke nke nje dị iche iche na-adịghị ahụkebe ugbua, na ndabere nke akụkọ sayensị dịnụ, anyị chere na usoro a dị ugbu a kwesịrị ịrụ ọrụ megide ụdị nje dị iche iche.
Ngwa teknụzụ dị iche iche nwere ike ịkwụsị mgbasa nke abụọ site na mpaghara dị iche iche na sel dị ndụ site na aka. Ihe mkpuchi nano na-echebe onwe ya na-arụ ọrụ maka ebe niile dị ka akwa (masks, gloves, uwe elu dọkịta, ákwà mgbochi, akwa akwa), ígwè (mbuli elu, ụzọ ụzọ, nobs, okporo ụzọ, njem ọha na eze), osisi (arịa ụlọ, ala, ogwe nkewa) , ụlọ (ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ na ebe obibi iche), plastik (switches, kichin na ngwa ụlọ) nwere ike ịzọpụta ọtụtụ ndụ.